Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – विधायकत्वबाट मात्र होइन पार्टीबाटै राजीनामा दिनसक्छु : दार्जीलिङका विधायक डा. छेत्री
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरूङले गोर्खा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए)मा
राज्य सरकार अथवा पश्चिम बङ्‌गालका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले हस्तक्षेप गरेको विरोधमा
दार्जीलिङ क्षेत्रका तीनजना विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्री, डा. रोहित शर्मा, त्रिलोक देवानले विधायक पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्‌ ।
यसै रन्कोमा गुरूङले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन पनि गर्छु भनिरहेका छन्‌ ।
यसै सम्बन्धमा कालेबुङका विधायक डा. हर्कबहादुर छेत्रीसित पत्रकार एव‌ं कवि मनोज बोगटीद्वारा गरिएको अन्तर्वार्ता ।
-विधायकहरूको राजीनामाको घोषणा हुनअघि तपाईँहरूको विचार मागियो ?
मागिएन। पार्टी महासचिव रोशन गिरीले फोन गरेर भने, ‘२३ सितम्बरको दिन तपाईँहरूले राजीनामा लेख्नुपर्छ, २४ मा बुझाउनुपर्छ।’ त्यत्ति नै हो। अहिले १८ मा नै राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने पनि सुनेको छु।
-पार्टीको पोलिसी कसले बनाउँछ ?
 हाम्रो पार्टीमा पोलिसी पनि बनाउँछ ? मलाई थाहा छैन।
-निर्णयहरू कसले गर्छन्‌ ?
 दार्जीलिङका वरिपरिका केन्द्रीय समितिका एक दुई जनाले, महासचिव अनि मुख्य रूपमा अध्यक्षले ।
-केन्द्रीय समितिमा त सबै महकुमाका सदस्य छन्‌, होइन र ? उनीहरूको मत अनिवार्य हुँदैन ?
 छन्‌ नि, उनीहरू पनि दार्जीलिङमा अघिबाटै तय भइसकेका कुरा सुन्नु त हो। धेरैलाई त बैठकको एजेन्डा नै थाहा हुँदैन।
-सुबास घिसिङले पो एक्लै निर्णय गर्थे रे उहिले, तपाईँको पार्टीमा पनि उस्तै रहेछ त।
 होइन, हाम्रो पार्टीमा अनुशासन सबैले पालन गर्छन्‌।
-अनुशासन पालन कि आदेश ?
-कार्यक्रम बनाउने, पोलिसी बनाउने स्टडी फोरम छ, केन्द्रीय समिति छ, सबैको मत, चर्चा परिचर्चापछि पो राजीनामाको घोषणा हुनुपर्ने होइन ?
 यसमा मेरो टिप्पणी छैन। तर जुन राजीनामाको निर्णय भयो, व्यक्तिगत रूपमा त हाम्रो पक्षमा नै थियो। विधायकत्व सकिन छ सात महिनाअघि नै शान्ति मिल्नेथ्यो। तर घोषणा गर्नुअघि हामीलाई सोधेको भए जुन उद्देश्यको लागि राजीनामा गर्नुपर्दैछ भनिँदैछ, त्योभन्दा धेर प्रभावशाली विकल्प, बाटो निस्कन सक्थ्यो कि । तर हाम्रो अनुपस्थितिमा निर्णय गर्नु भनेको हामीलाई फर्निचरजस्तो ठान्नु हो। फर्निचर बोल्ने होइन, जता सार्दा पनि भयो। यसको माने अब पार्टीमा हामी हुँदा पनि नहुँदा पनि केही फर पर्दैन भन्ने नै निस्किन्छ। हामी पार्टीलाई योगदान पुर्याैउने ठाउँमा रहेनौँ । यस्तो निर्णय सुन्दा, आत्मग्लानि पनि भयो, आत्मसम्मान, स्वाभिमानमा धक्का पुगेको अनुभव पनि गरेँ।
-राजीनामाको घोषणापछि विधायकहरूको भेट भएन ?
 भएन। कुरा पनि भएन। विधायक रोहित शर्माले फोन गरेका थिए, क्याडरलेजस्तो कुरा भयो। ममता व्यानर्जीले के भने..हरू। सम्बन्धित कुराबारे कुरै भएन।
-निर्णय थोप्नअघि तपाईँहरूलाई बोलाएको भए नि के हुन्थ्यो र ?
 बोलाएको भए राज्य सरकारको हस्तक्षेप कहॉंनेर हुँदैछ, हस्तक्षेप जीटीएभित्र भएको लिगल प्रोभिजनलाई भाइलेट गर्नु हुँदैछ ? राजीनामासँगसँगै कोर्ट जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ, केन्द्र सरकारमा जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? घोषणालाई प्रभावशाली बनाउन सक्थ्यौँ । बोलाएन, यसको अर्थ पार्टीमा हामी काम नलाग्ने भयौं भन्ने नै बुझेँ मैले। राज्यको हस्तक्षेपविरुद्ध त आँखा चिम्म गरेर कोर्टमा जानसक्ने कुरा थियो । केन्द्रमा जान सक्थ्यौँ।
-यसको मतलब राजीनामाको निर्णय युक्तिसङ्‌गत भएन त ?
 मलाई त त्यही लाग्यो।
-तपाईँ पार्टीको प्रवक्ता होइन अनि ? प्रवक्तालाई पनि थाहा भएन है ?
 प्रवक्ता त हो तर पार्टीको कुनै कुरा मलाई थाहा हुँदैन। पत्रकारले सोध्छ, यसो पो भएछ, के हो भनेर, मसित उत्तर नै हुँदैन। पत्रकारबाट पो पार्टीको कुरा थाहा पाउँछु म त। पार्टीको प्रवक्ताको यो हाल छ।
– घटनाले त पार्टीमा एकल निर्णय नै हुन्छ भन्ने बुझाउँछ त ।
बैठकमा को को थिए, कस्तो तर्क भयो, केही थाहा हुँदैन। नामको प्रवक्ता हुँ म । कामको होइन।
-कार्यकर्ताको हिसाबले, विधायकको हिसाबले, जिम्मेवारीको हिसाबले, निर्णयलाई स्वीकार्नुभयो ?
 कार्यकर्ता र विधायकको हिसाबले स्वीकार्छु, जिम्मेवारीको हिसाबले चाहिँ कन्फ्युजनमा छु। त्यो राजीनामा दिन जॉंदा स्पष्ट पार्छु।
-कस्तो कन्फ्युजन ?
 म आफैलाई थाहा छैन।
-कन्फ्युज पनि हुने, थाहा पनि नहुने ?
 एउटा कुरा थाहा छ, निर्णय गर्दा कालेबुङका लागि के ‘बेस्ट’ हुन्छ, त्यसलाई ध्यानमा राखेर गर्छु।
-कालेबुङलाई जिल्ला बनाउने कुरा हो ? ममता व्यानर्जीले पनि कालेबुङलाई दार्जीलिङ बनाउँछु भनिन्‌, त्यही जिल्लाकै कुरा त होला।
 राजीनामा दिएको दिन नै भनौंला।
-केही नयॉं निर्णायक घटना हुनेवाला छ हो ?
 हो, कि त पार्टीमा इमान्दार भएर बस्छु, कि त लेखनमा आउँछु, कित त गुरूबा हुन्छु।
-पार्टीबाट पनि राजीनामा दिनुहुन्छ ?
 एउटा अप्सनमा त्यो पनि छ। किनभने केही निर्णय त पक्कै गर्छु। भोलि दोष खप्न मात्र किन बस्ने र ? एकदिन न एकदिन ‘तिमीले पार्टीलाई केही सजेस्ट गरेनौ ?’ भन्ने प्रश्न उठ्‌छ। पार्टीले कहिल्यै सजेशन माग्दैन। कहीँ न कहीँ काम बिग्रिरहेकै छ। जुन दोष मेरो होइन, त्यो किन मैले भोग्नु ? एकदिन न एकदिन म जवाबदेही हुनै पर्छ, त्यसको छिनोफानो किन आजै नगर्ने र ? पार्टीमा पहिले जुन महत्व थियो मेरो त्यो आज छैन। एकदिन काम बिग्रिन्छ, किन म त्यसको भागिदारी हुनु र ?
-पहिला पनि राजीनामा दिनुभएकै हो। त्यस्तै त होला नि फेरि।
 त्यतिखेर त स्वेच्छाले गर्दैथिएँ। आन्दोलन चल्दैथियो। साथीको हत्या भयो। राजनीति गर्न मन लागेन राजीनामा गरेँ। आन्दोलन चर्किरहेकोले दायित्वबोधको कुरा पनि आयो, पार्टीमा फर्किएँ। यसपल्टको राजीनामा निर्देशमा गर्दैछु।
-विधायक र पार्टी दुवैबाट राजीनामा दिने कुरा हो ?
 दुइटै मेरो प्राथमिकतामा छ। १८ तारिक पहिलो प्राथमिकता थाहा हुनेछ नि ।
-पार्टीले डा. हर्कबहादुर छेत्रीलाई पर पर गर्छ, है ?
 वर गरेको भन्दा पर गरेकै राम्रो । आफ्नो काम गर्न त पाइन्छ। पर गरेको हो कि वर, जनताले देखिरहेकै छन्‌।
-बङ्‌गालका नेताहरूसित तपाईंको राम्रो सम्बन्ध छ रे, त्यही कारण पार्टीको हाइकमान बिच्केको रे नि, हो ?
 विधानसभामा सम्बन्ध बनाउन गएको, राम्रै त हुन्छ। सम्बन्ध राम्रो बनाउनेलाई पर गर्ने हो भने मैले के भन्नु । तर त्यो हल्ला मात्र हो । त्यस्तो होइन।
-विमल गुरूङले गोर्खाल्याण्ड माग्न भनेर विधानसभा पठाएको, फेरि गोर्खाल्याण्डको निम्ति नै फर्काउँदै छ, कुरा मिलेन त ।
 सिलेबसहरू रिभाइज भइबस्छ नि । काम गर्नेले जहॉं बसे पनि काम गर्छ। राज्य सरकारसित गोर्खाल्याण्डको बाह्र हातको पनि सम्बन्ध छैन। विधानसभा जानु भनेको गोर्खाल्याण्डको लागि होइन रहेछ, पहिला त हो जस्तो लाग्थ्यो। जातिको छवि बनाउन, चौकिदार होइन रहेछ गोर्खा भन्ने बुझाउने, खास मुद्दा बुझाउने ठाउँ हो त्यो। पार्लियामेन्टमा पो गोर्खाल्याण्डको कुरा उठाउनुपर्छ त। सासंद आफ्नै काममा व्यस्त छन्‌। पार्टीलाई पत्तो दिँदैनन्‌। उनलाई लगाम लगाउने क्षमता पार्टीमा छैन। लगाम लगाउन खोज्दा सांसदले तराईका चार वटा महकुमा देखाउँछन्‌। ‘तिम्रो तीन महकुमाको भोटले मात्र होइन मैले जितेको’ भन्छन्‌। हाम्रो सवाल चिन्हारीकै हो भने आफ्नै सांसद पठाउनुपर्ने थिएछ। अहिले दार्जीलिङमा सर्दारजी पो रहेछ भन्ने बुझ्छन्‌। भरपर्ने बानीले बिगारेको हो। खुल्लर, जसवन्त, अहलुवालिया पठायौँ, उनीहरूलाई भेट्‌नै गाह्रो।
-सांसद पठाउने कुरामा पनि चुक भएछ त है ?
 अहिले त्यस्तै देखिँदैछ।
-जातजातमा फाटो ल्याउने राज्य सरकार कि जीटीए ? राज्यले जति दिँदैछ त्यो जीटीएले कल्पना पनि गर्न सक्दैन, होइन र ?
खासमा बोर्डको कुरामा पार्टीले टाउको नदुखाएकै ठिक लाग्छ मलाई। विकास कोलकाताको कुनै गाउँमा भएन, यहीँ भयो। यहीँ विकास हुँदा किन टाउको दुखाउने ? ‘मैले विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा तिमीले किन गर्यौक ?’ भन्नु त हॉंसउठ्‌दो कुरा हो। जसले गरे पनि विकास पहाड़कै हो। तर जीटीएमा राज्य सरकारले हस्तक्षेप भने गरेकै हो। यसबारे कुरा गर्ने ठाउँ धेरै छ। आन्दोलन हुँदै गर्दा कसैले बोर्ड गठन गरेनन्‌। जीटीए आएपछि नै बोर्ड गठन हुँदैछ। जीटीएले बराबरी न्याय दिन सकेन होला। उनीहरूको आकांक्षा जीटीएले पुरा गरेन होला। जुन आर्थिक स्थिति छ, यस्तोमा सुविधा सबैको प्राथमिकतामा आउँछ। कसले सुविधा दिन्छ, जनता उतै जान्छ। एउटा बोर्ड बनिँदा र एक हजार घर बनिँदा ‘हामी गोर्खा होइनौँ’ भनेर तामाङले, लेप्चाले, मगरले भन्छ भने ऊ कहिल्यै गोर्खा थिँदै थिएन। जाति नै हो भने जति नै सुविधा आए पनि फुट्‌दैन। आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक कारणले जीटीएबाट पर हुनु जाति विभाजन हुनु होइन। सबैलाई सांस्कृतिक रूपले बॉंधेर राखेको छ। ‘अल्झेर क्यारे पछ्‌यौरी’मा नाच्छन्‌ उनीहरू। देउसे पनि खेल्छन्‌ नै। मरौ परौ, बिहे बटुलमा जान्छन्‌ नै। सामाजिकरूपले पनि फुटेका छैनन्‌। उनीहरू यदि जाति थिएनन्‌ भने जति नै एकठाउँ राख्दा पनि हुँदैन।
-आजको परिस्थितिको निर्माता मोर्चाको असफल आन्दोलन नै होइन ?
तीन वर्षमा नै यसमाथि टिप्पणी गर्नु अपरिपक्व कुरा हुन्छ। पुरापुरी दोष जीटीएलाई दिनु हुन्न, यो कलिलै छ, राज्य सरकारले पनि सौहार्दता देखाएन। हस्ताक्षर गरेको चुक्तिमा कायम रहेन राज्य पनि। दोष बराबरी हो।
-राज्यले सौहार्दता देखाएन भने कानुनको सहयोग लिनुपर्दैन ?
 पर्छ। त्यसै गर्नुपर्ने हो नि। म राजीनामा दिने मान्छेले के भन्नु र ?
-जीटीए कलिलो छ भनेर धर पाइँदैन नि, सम्झौता गर्दा सबै कुरा नबुझी हस्ताक्षर गरेर हुन्छ त ?
 आज भन्छु, ११ वटाको त्रिपक्षीय वार्तामा ९ वटामा म गएँ। कुनै डेलिगेशनलाई मैले लिड गरिनँ। जबकि भाषाको कारण पनि म धेरै कुरा बुझ्न र गर्न सक्थेँ। धेरै कुरा हतारमा भयो। एकप्रकारले मलाई ट्रष्ट गरेन पार्टीले।
-तपाईँलाई त अहिले पनि पार्टीले ट्रष्ट गरेकोजस्तो लाग्दैन।
 त्यो मैले मुखले भनिबस्नु पर्दैन, घटनाक्रमले नै बताउँछ।
-तृणमूल कङ्‌ग्रेसमा पो जान्छन्‌ रे डा. हर्कबहादुर छेत्री, भन्ने हल्ला पो छ त।
 बजारमा भोलि सीपीएममा जान्छ हर्कबहादुर छेत्री भन्ने हल्ला पनि चल्छ, कङ्‌ग्रेसमा पो जान्छ रे भन्ने हल्ला पनि चल्छसक्छ । हल्लै त हो ।
तस्बिर : lavainfo.blogspot.com [ Courtesy: Esamata]
1,022,870 total views,3views today
House resignation? Harka to lean on 'instinct' एक हातमा राजीनामा, अर्को हातमा गोजीनामा
HB Chettri fears of state govt’s...
Mar 29, 2014 Comments Off on HB Chettri fears of state govt’s wrath if BJP loses
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 287,580 total views, 4,453 views today Comments comments